त्यसोभए तपाइँ Cognos अपग्रेड गर्ने निर्णय गर्नुभयो ... अब के? - Motio
by लिसा Zavetzसेप्टेम्बर 22, 2021ब्लग, कोग्नोस एनालिटिक्स, Cognos प्रदर्शन, कारखाना स्तरवृद्धि0 टिप्पणी
यदि तपाइँ लामो समय हुनुहुन्छ Motio अनुयायी, तपाइँ जान्नुहुन्छ कि हामी Cognos उन्नयन को लागी कुनै अपरिचित छैनौं। (यदि तपाइँ नयाँ हुनुहुन्छ Motio, स्वागत छ! हामी तपाइँहरु संग खुसी छौं) हामी Cognos उन्नयन को "चिप र Joanna लाभ" भनिन्छ। ठीक छ कि अन्तिम वाक्य एक अतिशयोक्ति हो, जे होस्, हामीले Cognos ग्राहकहरु लाई आफैले अपग्रेड गर्न को लागी एक DIY दृष्टिकोण बनाएका छौं।
एक प्रविधि हामी अझै सम्म कभर गर्न को लागी विचार हो कि तपाइँ तपाइँको Cognos उन्नयन आउटसोर्स गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक टीम भर्ती र एक पूर्ण कार्यात्मक, माइग्रेट Cognos वातावरण को लागी जाग्न को रूप मा सरल छैन। तर यो पनि त्यति गाह्रो छैन।
हामी Cognos ग्राहक ओर्लान्डो उपयोगिता आयोग, जो Cognos ११ लाई उनीहरुको अपग्रेड आउटसोर्स संग बसे। OUC टीम पहिले Cognos १० मा अपग्रेड गरीएको थियो जसमा पाँच महिना लाग्यो। जब उनीहरु आफ्नो अपग्रेड आउटसोर्स, सम्पूर्ण प्रक्रिया मात्र आठ हप्ता लाग्यो। आशिष स्मार्ट, इन्टरप्राइज आर्किटेक्ट, आफ्नो टीमले हामी संग अपग्रेड प्रक्रिया मार्फत सिकेका पाठहरु साझा गरे। उनले उल्लेख गरे कि उनको टीम एक Cognos अपग्रेड को लागी सबै भन्दा राम्रो अभ्यास को पालन गरे।
उत्तम अभ्यास तयार र संकीर्ण क्षेत्र सम्म सफा गर्नुहोस्:
1. प्रक्रिया को प्रारम्भ मा प्रयोगकर्ताहरु लाई शामिल गर्नुहोस्, र विषय विशेषज्ञहरुलाई भाग लिन को लागी प्रोत्साहित गर्नुहोस्। तिनीहरूलाई Cognos सफा गर्न र UAT परीक्षण गर्न अनुमति दिनुहोस्। उनीहरु "मेरो फोल्डरहरु" मा के छन् की निर्धारण गर्न को लागी सार्ने वा नहुने को आवश्यकता निर्धारण गर्न सक्छन्।
2. तपाइँ सामान को एक धेरै माइग्रेट गर्न जाँदै हुनुहुन्छ। तपाइँको गैर उत्पादन वातावरण सफा गर्नुहोस्। तपाइँ देख्नुहुनेछ कि चीजहरु उत्पादन र गैर उत्पादन को बीच सिंक बाहिर छन्। यो तपाइँलाई मद्दत गर्न को लागी यदि तपाइँ दुई सिंक गर्न को लागी प्रयास को माध्यम बाट जान चाहानुहुन्छ वा एक ब्याकअप मा भरोसा गर्न चाहानुहुन्छ। उत्पादन रिपोर्ट overlaying गरेर, यो भ्रम मा कटौती।
उत्तम अभ्यास: धेरै गर्न सक्नुहुन्छ को रूप मा स्वचालित गर्नुहोस्
3. स्वचालित परीक्षण को लागी संकेत सम्मिलित गर्नुहोस्। यो बुझ्न को लागी कसरी ब्यापार प्रयोगकर्ताहरु रिपोर्ट संग अन्तरक्रिया को लागी लाभदायक छ।
४. प्रशासक र जागिर (OTJ) प्रशिक्षण मा लगानी। सुनिश्चित गर्नुहोस् कि तपाइँ पहिले प्रशासक प्रशिक्षण पूरा गर्नुहोस् जब कन्फिगरेसन परिवर्तन सिफारिश गरीन्छ, तपाइँ यसलाई तपाइँको भविष्यको वातावरणमा सार्न सक्नुहुन्छ। जब परीक्षण संग संयुक्त, तपाइँ अन्तिम मिनेट तनाव बाट बच्न सक्नुहुन्छ।
उत्तम अभ्यास: सुनिश्चित गर्नुहोस् कि स्यान्डबक्सहरु राम्रो प्रदर्शन गरीरहेका छन्
5. छिटो केहि नमूना/कोर रिपोर्ट संग एक प्रशिक्षण वातावरण सुरक्षित। पावर प्रयोगकर्ताहरु र प्रशिक्षकहरु को लागी एक Cognos 11 उदाहरण सक्रिय गरीयो ताकि उनीहरु शुरू मा प्राप्त गर्न सक्छन्। तपाइँको टीम कोर टेम्प्लेट/रिपोर्टहरु लाई माइग्रेट गर्न को लागी सुनिश्चित गर्न को लागी उनीहरु एकै डाटाबेस मा सार्न र उही परिणाम प्राप्त गर्न सक्छन्। यो विकासकर्ताहरु र उपभोक्ताहरु लाई चाँडै खेल्न को लागी एक मौका प्रदान गर्दछ।
6. स्यान्डबक्स वातावरण परिवर्तन बाट तपाइँ ढाल। एक स्यान्डबक्स यो सुनिश्चित गर्दछ कि उत्पादन को लागी ब्यापारिक प्रयोगकर्ताहरुको सेवा बन्द गर्न को लागी छैन। आउटसोर्स संग, OUC को उत्पादन फ्रीज हप्ता बाट मात्र एक सप्ताहांत मा 4-5 दिन सम्म गयो। यो सुनिश्चित गर्दछ कि अन्त प्रयोगकर्ताहरु परेशान छैनन् र दैनिक गतिविधिहरु मा ध्यान केन्द्रित गर्न सक्छन्।
आशिषले केहि अन्तिम विचारहरु थपे। संगठित रहनुहोस्, एक राम्रो मानसिकता राख्नुहोस्, र प्रगति को समीक्षा गर्नुहोस्। अपग्रेड आउटसोर्सिंग गरेर, OUC प्रतिस्पर्धा को अगाडि रहन, एक योजना संग distractions रोक्न, र अप्रत्याशित कार्यान्वयन समस्या बाट बच्न सक्षम थियो।
जान्नुहोस् कि तपाइँ OUC जस्तै तपाइँको अपग्रेड आउटसोर्स गर्न सक्नुहुन्छ कारखाना स्तरवृद्धि.
ब्लगकोग्नोस एनालिटिक्सकारखाना स्तरवृद्धिअपग्रेडCognos अपग्रेड गर्दै
लिसा Zavetz | अक्टोबर 14, 2021 | 0
ब्लगइतिहास Motio Motio क्लिकSoterre
Motio, Inc Gitoqlok प्राविधिक जटिलता PLANO, टेक्सास बिना एक साथ कडा संस्करण नियन्त्रण ल्याउने अधिग्रहण - अक्टूबर २०२१ - Motio, Inc., सफ्टवेयर कम्पनी हो कि तपाइँ तपाइँको व्यापार को खुफिया बनाएर तपाइँको एनालिटिक्स लाभ को बनाए राख्न मा मदद गर्दछ र ...
लिसा Zavetz | अक्टोबर 13, 2021 | 0